Duulimaadyada Dahsoon ee F-117 Nighthawk Stealth Fighter
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Aviation » Duulimaadyada Dahsoon ee F-117 Nighthawk Stealth Fighter
Aviation • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • News • Dalxiiska • Sirta Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
F-117 Dagaal-yahan u Qarsoon Nighthawk
In kasta oo diyaaraddii F-117 Nighthawk Stealth Fighter si rasmi ah loogu beddelay diyaaraddii F-22 Raptor, haddana waxay u muuqataa inay weli shaqaynayso, oo loo ekeysiiyay gantaalaha safarka. Xaqiiqdii, taariikhda Nighthawk ma aha qarsoodi.
Abuuritaanka Nighthawk waxaa si qarsoodi ah loo bilaabay 1975.
Waxaa markii ugu horreysay la duuliyey sannadkii 1981 -kii, laakiin waxaa lagu qariyay si qarsoodi ah, dadweynahu ma ogeyn diyaaradda ilaa 7 sano kadib.
Ka dib markii hawlgabnimadeeda lagu dhawaaqay tan iyo markii lagu beddelay Raptor, waxay umuuqataa diyaaradu inay kaydsanayd iyada oo isla markaa aan runtii firfircoonayn.
Nighthawk waxaa markii hore loo sameeyay diyaarad weerar ah oo uu sameeyay Lockheed Martin kadib markii laga shaqeeyay farsamada qarsoodiga. Abuuritaankii kii ka horreeyay, diyaaraddii tijaabinta tijaabada ahayd ee lagu magacaabi jiray Have Blue, ayaa si qarsoodi ah loo sameeyay 1975kii.
Sannadkii 1978, F-117A wuxuu galay horumar waxaana markii ugu horreysay la duuliyey 1981. Laakiin dadweynuhu ma oga jiritaankiisa ilaa si rasmi ah loogu dhawaaqay 7 sano ka dib 1988kii.
Intii u dhaxaysay 1982 iyo 1988, Nighthawk -kii ugu horreeyay waxaa loo dhiibay inuu ahaa diyaaraddii ugu horraysay ee qarsoodi ah ee hawlgalisa ciidanka cirka Mareykanka (USAF). Waxay noqon doontaa mid ka mid ah 59 dayuuradood oo qarsoodi ah oo ay USAF heli doonto ilaa 1990, taasoo noqonaysa tii ugu dambaysay ee abid la keeno.
Ciidanka Cirka Mareykanka ayaa beddelay F-117 oo leh F-22 Raptor ka hor intaan barnaamijka F-22 la baajin 2009. Waxaa lagu beddelay mid ka jaban oo aad u badan F-35 Joint Strike Fighter. Tobankii ugu horreeyey ee 55 diyaaradood oo F-117 ah ayaa hawlgab ahaa December 2006. Xaflad hawlgab oo rasmi ah ayaa ka dhacday Saldhigga Ciidanka Cirka ee Wright-Patterson bishii Maarso 2008.
Laakiin Nighthawks ma tagin. Waxay ku kaydsan yihiin hangarorada garoon diyaaradeed oo ku yaal Tijaabada Tonopah ee Nevada. 4 -tii Habeenimo ee ugu dambeysay waxay soo gaareen Heerka Tijaabada Abriil 22, 2008. Baalasha iyo dabada ayaa laga saaray si loogu kaydiyo, laakiin diyaaradaha qaarkood si degdeg ah ayaa loogu yeeri karaa duulimaad haddii loo baahdo.
Dhawaan, Ilaalada Qaranka ee Hawada ayaa xaqiijisay in F-117 Nighthawks loo adeegsado tababbarrada tababarka, oo ay ku jirto u adeegidda ku-xigeennada gantaallada socdaalka ee soo socda. Caddayntu waxay muujinaysaa in tababarkan tababarku uu ahaa mid in muddo ah soo jiray. Sababtoo ah diyaaradu waxay u ekaan kartaa ficillada sida gantaalaha dalxiiska, waxay yihiin goob ku habboon jimicsiga difaaca gantaalaha.
Nighthawk ayaa laga yaabaa inay magaceeda heshay maxaa yeelay waxaa loo adeegsadaa oo keliya hawlgallada waqtiga habeenkii. Iyo qarsoodi ahaan, shaki kuma jiro, marka la eego taariikhdeeda iyo xitaa midabkiisa madow, taas oo sahlaysa in lagu dhex milmo cirka habeenka. Laakiin yaa u baahan isku -darka marka aad ka arki karto raadaarka?
Dusha sare iyo astaamaha geeska ee Nighthawk ayaa loo habeeyay si ay uga tarjumaan raadaarka cadaawadda u leh calaamadaha dogobka cidhiidhiga ah, oo laga fogeeyay baaraha radar ee cadowga. Dhammaan albaabada iyo albaabada furitaanka ee diyaaradda waxay leeyihiin ilkaha hore iyo cidhifyada oo ka tarjumaya raadaarka. Dusha sare ee diyaaradda waxaa lagu dahaadhay maaddo raadaar-qaadaysa (RAM). Waxaas oo dhami waxay ka dhigayaan mid aan la arki karin.
Sidoo kale loo yaqaan Frisbee iyo Wobblin 'Goblin, himilada F-117A Nighthawk waa inay dhex gasho bay'adaha halista ah oo ay weeraraan bartilmaameedyada qiimaha sare leh oo leh saxnaan sare. Nighthawk wuxuu ku jiray adeegga hawlgalka Panama, intii lagu jiray Hawlgalkii Desert Storm, Kosovo, Afghanistan, iyo intii lagu jiray Hawlgalkii Xorriyadda Ciraaq.
Diyaaradaha qarsoon waxaa inta badan lagu dhisay aluminium leh titanium meelaha aagga mishiinka iyo hababka qiiqa.